Global Voices teny Malagasy » Lasa sesitany rehefa avy any am-ponja: antsafa nifanaovana tamin’ilay mpikatroka Vietnamiana Tran Thi Nga · Global Voices teny Malagasy » Print
Lasa sesitany rehefa avy any am-ponja: antsafa nifanaovana tamin'ilay mpikatroka Vietnamiana Tran Thi Nga
Voadika ny 04 Jolay 2020 4:59 GMT 1	 · Mpanoratra The 88 Project Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Vietnam, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Gadra politika teo aloha, Tran Thi Nga niresaka momba ny vokatry ny famonjana vehivavy sy ny ankizy. Pikantsary avy amin'ny horonantsary YouTube nalefan'ny The 88 Project
Tao amin'ny The 88 Project, tranonkalam-baovao tsy miankina manao tatitra momba an'i Vietnam, ity lahatsoratra  ity. Nasiam-panitsiana ary naverina navoaka eto amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Afaka nanatontosa antsafa niaraka tamin'ilay gadra politika teo aloha Tran Thi Nga  momba ny niainany tany am-ponja sy ny zava-misy iainan'ny vehivavy sy ny ankizy any am-ponja ny The 88 Project.
Navotsotra  ny fonja tamin'ny volana Janoary i Tran Thi Nga ary nalefa sesitany avy hatrany tany Etazonia. Telo taona tamin'ny sazy an-tranomaizina sivy taona noho ny fikatrohany momba ny zon'ny fananan-tany sy ny zon'ny mpiasa no vitany tamin'ny fotoana namotsorana azy.
Ato anatin'ity lahatsary ity, miresaka momba ny fiantraikan'ny fisamborana azy ara-psikolojika teo amin'ny zanany mbola kely sy ny fotoana niainany tany am-ponja i Nga. Vao efatra taona monja ny zanany faravavy raha nanatri-maso ny fisamboran'ny polisy ny reniny tao an-tranony izy. Rehefa nentina natao famotorana ny vadin'i Nga dia notanana ihany koa ny zanany enin-taona ary nosarahana tamin-drainy mihitsy aza. Niady tamin'ny fanavakavahana ny zanak'i Nga tany an-tsekoly nandritra ny nigadrany ary toy izany ihany koa ny fahasarotana tamin'ny fitsidihana ny reniny tany am-ponja. Nafindra tany amin'ny toeram-pamonjana tany amin'ny 1.000 km miala ny fonenana nisy ny fianakaviany i Nga ary matetika ny manam-pahefana no mangataka fahazoana alàlana amin'ny fitsidihana azy mba hanaporofona fa meloka izy.
Nandrisika ny mpandray anjara iraisampirenena izy mba hitaky ny zon'ny vehivavy sy ny ankizy ary hamaha ny tsy rariny vokatry ny ataon'ny manampahefana Vietnamiana amin'ireo vehivavy gadra.
Tran Thi Nga no gadra politika fahefatra tato anatin'ny taona vitsivitsy izay navotsotra mialoha nefa voatery natao sesitany ho takalon'ny fahafahany, taorian'i Nguyen Van Dai  (Jona 2018), Le Thu Ha  (Jona 2018) ary Nguyen Ngoc Nhu Quynh  (Oktobra 2018).
Niasa ho toy ny mpiasa mpifindra monina tany Taiwan i Tran Thi Nga izay nizakàny tsy rariny maro. Lasa mpisolovava ny zon'ny mpiasa mpifindra monina sady mpanohana ny demokrasia maro-antoko sy ny zon'ny vehivavy ihany koa izy rehefa niverina tany Vietnam. Niditra an-tsehatra tamin'ny fikatrohana ny zon'ny fananan-tany ihany koa izy mba hanoherana ny fakana tany an-keriny ataon'ny manampahefana ao amin'ny vondrom-piarahamonina misy azy.
Fara fahakeliny, indroa izy no nodarohana  noho ny fikatrohany. Nodarohan'ny jiolahimboto mpanohana ny governemanta izy indray mandeha tamin'ny volana May 2014 ary tapaka ny tanany sy ny tongony, ary nodarohan'ny polisy indray ny iray hafa izay nisintona azy nivoaka ny bisy tamin'ny volana Aogositra 2015.
Nosamborina  tany an-tranony tany Ha Nam tamin'ny 21 Janoary 2017 i Nga noho ny lahatsariny sy ny lahatsorany an-tserasera izany noheverina fa “fanentanana manohitra ny fanjakana.”
Notanana tany amin'ny toerana miafina tao Ha Nam izy mialoha ny fitsarana azy ny volana Jolay 2017. Naharitra andro iray monja ny fitsarana azy ary norarana tsy hiditra ny efitrano fitsarana ny fianakaviany sy ny mpanohana azy. Voasazy higadra sivy taona izy ary dimy taona naraha-maso tamin'ny trano manokana.
Faly ny ekipa The 88 Project fa afaka ankehitriny i Tran Thi Nga ary tafaraka indray amin'ny vady aman-janany.
Na izany aza, tianay ny manamarika fa ny fanafahana an'i Nga mialoha dia tsy midika hoe nihatsara akory ny zava-misy iainana momba ny zon'olombelona any Vietnam. Zara raha nisy ny fanafahana tao anatin'ny taona vitsivitsy izay ary voatery nandao ny firenena ireo gadra politika navotsotra mialoha. Mbola any am-ponja ireo izay tsy nety niala ny firenena ary miatrika fandrahonana bebe kokoa.
Jereo ny antsafa  feno :
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/07/04/148695/
 Tran Thi Nga: https://the88project.org/profile/3/tran-thi-nga/
 Nguyen Van Dai: https://the88project.org/profile/48/nguyen-van-dai/
 Le Thu Ha: https://the88project.org/profile/4/le-thu-ha/